Falanqeyn: Go'aankii uu golaha shacabku kaga laabtay muddo kororsiga
Go’aanka Madaxweyne Farmaajo iyo Golaha Shacabka ee Baarlamanka ayay falanqeeyeyaashu aaminsan yihiin in uu ka dhashay cadaadis xooggan oo ka yimid beesha caalamka, siyaasiyiinta mucaaradka, iyo maamul goboleedyada oo ka soo horjeestay muddo kororsiga.
Hadaba, arrintan go'aankii maanta ee baarlamaanka muxuu uga dhigan yahay siyaasaddii cakirneyd ee Soomaaliya? Su’aashaas waxa uu Maxamed Colaad Xassan weydiiyay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacada Dooxa ee dalka Qatar, arrimaha Somaliyana ka faallooda.
Falanqeynta go'aankii baarlamaanka ee maanta
Hadalkii maanta ee madaxweynaha iyo go’aankii baarlamanka ayaa ku soo beegmay xilli shacabka magaalada Muqdisho ay maalmihii la soo dhaafay wadnaha farta ku hayeen iyagoo ka baqayay in muranka arrimaha doorashada dartii ay caasimaddu dib ugu noqoto dagaalladii sokeeye. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa qaar ka mid ah shacabka Muqdisho weydiiyay aragtidooda ku aadan go’aankii aqalka hoose ee baarlamanka iyo khudbaddii madaxweynahaba.
aragtida dadka reer Muqdisho ee go'aankii baarlamaanka